Adaemone Wɔ Hɔ Ampa? | Bible Nsɛmmisa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Aane. Adaemone yɛ “abɔfo a wɔyɛɛ bɔne.” Wɔyɛ honhom abɔde a wɔtew Onyankopɔn so atua. (2 Petro 2:4) Ɔbɔfo a odii kan yɛɛ ne ho adaemone ne Satan Ɔbonsam. Bible frɛ no “adaemone panyin.”—Mateo12:24, 26.
Wɔtew atua wɔ Noa bere so
Bible ka sɛ, ansa na Noa nsuyiri no reba no, abɔfo bi tew atua. Ɛkyerɛ mu sɛ: “Nokware Nyankopɔn mma no hui sɛ nnipa mmabea ho yɛ fɛ, na wɔwarewaree wɔn mu biara a wɔpɛ.” (Genesis 6:2) Saa abɔfo bɔne no ‘gyaw wɔn ankasa tenabea a ɛsɛ’ wɔ soro na wɔdan wɔn ho nnipa sɛnea ɛbɛyɛ a wɔne mmaa bɛda.—Yuda 6.
Nsuyiri no bae no, abɔfo atuatewfo no san danee wɔn ho ahonhom na wɔkɔɔ soro. Nanso, Onyankopɔn pamoo wɔn fii n’abusua no mu. Asotwe a Onyankopɔn de maa wɔn baako ne sɛ, wɔrentumi nnan wɔn ho nnipa bio.—Efesofo 6:11, 12.